Tarisa Chikamu Chekutanga che 'Chucky' Pano Pano, Izvozvi - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Tarisa Chikamu Chekutanga cha 'Chucky' Pano Pano, Izvozvi
Tarisa Chikamu Chekutanga cha 'Chucky' Pano Pano, Izvozvi
Hechino Chikamu Chekutanga mune Izvo Zvakakwana
by Trey Hilburn III October 13, 2021 7,459 maonero
Chikamu chekutanga cheSyfy's Chucky inowanikwa mahara pano chaipo. Kana iwe usati wagona kutarisa parizvino, ino ndiyo nguva yakakwana yekubata uye uone kuti munhu wese akadanana nei.
Mune mutsva terevhizheni nhepfenyuro, rakanakisa dhorobha reAmerica rinokandwa mumhirizhonga mushure mevintage 'Good Guy' dhizaini inosvika kumusoro kwemasabhabhu muyadhi yekutengesa. Munguva pfupi iri kutevera, munhu wese anofanira kurwisana nehumhondi hunotyisa hunotanga kufumura hunyengeri hwakadzika hweguta uye zvakavanzika zvakavanzika. Zvichakadaro, shamwari nevavengi kubva kuna Chucky apfuura zvinokambaira adzokere munyika yake uye atyisidzire kufumura chokwadi chiri kumashure kwake kwakasarudzika semwana airatidzika kunge akajairika uyo neimwe nzira akazova chikara chinozivikanwa.
Chikamu chekutanga chakatanga zvakanyanya. Izvo zvinoitisa zvakawanda kuitiswa munguva yayo pfupi yekumhanya nekuwana chaiko Chucky uye ropa uye gore. Zvinoita sekudaro Chucky anga achingotsamwa nezera. Iyo zvakare ine kushamisika kutendeuka kwehunhu kuna Devon Sawa uyo anotamba mapatya hama munhevedzano.
Wakakwanisa here kuona chikamu chekutanga che Chucky zvakadaro? Regai tizive zvaunofunga pane edu Facebook uye Twitter mapeji. Nei uchimirira kuti utarise pazasi!